Tim Cook Miresaka ao amin'ny Goldman Sachs | Vaovao IPhone
Tim Cook dia miteny ao amin'ny Goldman Sachs
Tim Cook dia nandray anjara tamin'ny kaonferansa teknolojia Goldman Sachs, niaraka tamin'i Apple mivantana mivantana tao aminy pejy natokana ho an'ny hetsika manokana. Raha sanatria ka tsy manam-potoana hihainoana ny lahateny rehetra ianao dia eto ianao famintinana miaraka amin'ny zava-dehibe indrindra.
About Wiki ilay iPhone mora vidy izay efa naely nandritra ny volana maro ary manome toky ny rehetra fa hivoaka amin'ity taona ity izy, nanome toky i Cook fa tsy hanao zavatra tsy heverin'izy ireo ho vokatra tsara mihitsy izy ireo.
Izahay dia tsy hanao vokatra izay tsy vokatra tsara. Tsy toy izany isika. Izany dia nilaza fa raha mijery ny zavatra nataonay ho an'ireo izay saropady kokoa amin'ny vidiny ianao dia nampidininay ny vidin'ny iPhone 4 sy 4S, ary tamin'ny telovolana lasa teo dia tsy nanana famatsiana ampy an'ny iPhone 4 izahay, izay nahagaga anay . Raha tokony hanamora ny vokatra dia mamorona vokatra vaovao misy traikefa samihafa izahay.
Nandritra ny taona maro dia nilaza taminay ny olona hoe maninona ianao no tsy manana $ 500 ka hatramin'ny $ 1000 Mac? Niara-niasa taminy nandritra ny fotoana ela izahay ary nandefa ny iPad. Miezaka mamerina mamokatra vokatra vaovao foana izahay.
Apple dia mividy orinasa kely amin'ny tahan'ny orinasa iray isam-bolana. Io ilay antsoina hoe "Aqui-hires" (fanavahana avo lenta). Toy ny ohatra ny orinasa PA Semi novidiny taona vitsivitsy lasa izay.
Miaraka amin'i PA Semi izahay dia teo am-pandrafetana ny motera izay mitondra ny iPhone ankehitriny. Naka vondron'olona mahay be izahay ary nampiasainay hanatevin-daharana ny mpiasan'i Apple hiasa amin'ny iPhone, iPad, ary iOS. Efa nanao fividianana zavatra hafa mitovy amin'izany koa izahay ary mbola hanohy hanao izany.
Tsy midika akory izany fa tsy mahazo orinasa lehibe i Apple. Raha misy orinasa lehibe afaka manampy antsika hanao vokatra tsara dia hataontsika izany. Tsy mandoro antsika any am-paosintsika ny volantsika.
Ireo mpandinika sy mpampiasa vola dia manahy ny amin'ny fitomboan'ny Apple dia tsy lehibe tahaka ny tamin'ny taona lasa.
Apple dia nanao vokatra izay tsy fantatry ny olona fa tadiaviny nandritra ny taona maro, ary ankehitriny dia tsy afaka miaina tsy misy azy ireo izy ireo. Tsy mino izahay fa misy fetra.
Goavana ny tsenan'ny takelaka ary manararaotra fotoana lehibe ho an'ny Apple. Iray amin'ireo faritra iarahan'ny rindrambaiko sy ny fitaovana ary mamorona traikefan'ny mpampiasa latsaka ny valanoranony.
Tamin'ny taon-dasa dia nivarotra takelaka betsaka kokoa noho ireo PC amidin'ny HP izahay, mpanamboatra solosaina lehibe indrindra manerantany. Misy fiovana, ary mbola manomboka.
Tsy fantatro ny ampahany amin'ny tsenan'ny takelaka ananan'ny iPad satria isika ihany no mamoaka ny tarehimarika momba ny varotra.
Ny varotra iPhone dia tsara indrindra na eo aza ny tsikera sy ny tsena mampiseho tsy fahatokisana.
Mandritra ny fotoana maharitra, ho finday rehetra ny finday rehetra. Betsaka ny olona noho ny 1400 miliara manana finday avo lenta. Io no iray amin'ireo tsena lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Hatramin'ny 2007 dia nivarotra iPhones 500 tapitrisa izahay, ary 40% no namidy tamin'ny taon-dasa. Nandoa $ 8000 miliara dolara ho an'ireo mpandraharaha fampiharana iOS izahay.
Vao haingana no nipoitra ny vaovao fa nanakarama manam-pahaizana momba ny haitao OLED avy amin'ny LG i Apple, ary tsaho fa afaka mampiasa an'io haitao io amin'ny Apple fitaovana i Apple. Tim Cook dia manazava mazava tsara:
Mampihoron-koditra ny lokon'ny lokon'ny fampisehoana OLED. Ny fampisehoana Retina dia avo roa heny noho ny mazava. Betsaka ny lafiny tokony ho raisina amin'ny efijery ary i Apple no mikarakara azy rehetra.
Ary amin'ny fironana hampitomboana ny telefaona lehibe sy lehibe kokoa, nilaza i Cook fa ny mpanjifa antonony dia tsy miraharaha izay famaritana ara-teknika azy.
Ny orinasa dia mifaninana amin'ny fomba roa: ny fepetra sy ny vidiny. Ao amin'ny sehatry ny fakantsary, nilaza ny olona fa "ny ahy manana megapixel betsaka kokoa." Fantatrao ve ny hafainganam-pandehan'ny processeur AX? Tena maninona? Ny zavatra tadiavin'ny olona dia traikefa nahafinaritra rehefa mampiasa vokatra. Ary raha ny efijery no resahina, ny sasany tsy miraharaha afa-tsy ny habeny.
Ahoana ny hevitrao amin'ny zavatra rehetra nolazainy? Na eo aza ny zava-drehetra dia tsy vao sambany i Apple no tokony hiala amin'ny zavatra efa nomeny toky, toa ny iPad Mini, ohatra.
Fanazavana fanampiny - Ny iPhone mora vidy dia vita amin'ny plastika indrindra
Loharano - iDownloadBlog
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tim Cook dia miteny ao amin'ny Goldman Sachs
PhoneClean: manafaka toerana amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fako ao amin'ny fitaovanao
Radar Zapper: fitaovana fampitandremana radara feno